Dacwaddii muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa markale dib loo dhigay.
20th May 2020 by Barre Leave a Comment
April 23, 2020 ayaa Kenya, dhambaal u dirtay International Court of Justice, ku codsanayso in dhageysiga dacwada Badda, dib loo dhigo muddo aan xaddidneyn. Labo beri, kaddib codsiga Kenya, ayaa Maxkamaddu la wadaagtay Dowladda Soomaaliya.
Kenya, waxa ay doodda sal uga dhigtay cudurka Covid19, bandowga dalkeeda saaran iyo dhaqaalo xumo darteed in aysan u suuroobeyn ka qeyb galka dhageysiga dacwadda.
May 1, 2020 ayaa Dowladda Soomaaliya diidmada dib u dhigga dhageysiga dacwadda, la wadaagtay Maxkamadda iyo Dowladda Kenya. Waxa Dowladdeennu, ku talisay in dacwadda wakhtigeeda lagu dhageysto oo loo muddeysnaa June 8, 2020. Soomaaliya, oo isticmaalka aalladda iyo mareegta, internet –ka soo jeedisay in dacwada lagu dhageysto.
May 4, 2020 ayaa Kenya, ka jawaabtay doodda iyo diidmada Dowladdeennu keentay. Kenya, waxa ay ka gows–qabsatay in ay tagayso dhageysiga dacwada, codsigeedii hore ayeyna ku adkaysatay.
May 7, 2020 ayaa markale dowladda Soomaaliya, dhambaal jawaab ah dirtay, aragti ay diidmadeedii hore ku xoojinayso.
May 19, 2020 (oo maanta ah) Maxkamaddu waxa ay soo saartay aragtideeda iyo go’aan ay ku muddeysay wakhtiga dhageysiga dacwaddu dhacayso. Maxkamaddu, waxa ay goysay in March 15, 2021 si rasmi ah u dhacdo dhageysiga dhacwada.
Waa markii saddexaad oo ay Maxkamaddu dib u dhigayso dhageysiga dhacwada. Saddexda jeerba soo jeedinta dib–u–dhaca Kenya, ayey ka timid, waana u meel martay.
Afar (4) asbuuc oo keliya ayaa u dhaxeysa muddo xilleedka Madaxweyne Mohamed Abdullahi Farmaajo iyo maalinta loo muddeeyey dhageysiga dacwadda badda. Sida caadiga ah, howshaan waa qaddiyad qaran, wax saameyn ah oo xukuumadda hadda joogta io midda beri imaan doonta ku yeelanayso ma jirto haddii aan Soomaalidu, isku khaldin labadaas.
Dowladda Soomaaliya, waxaa la gudboon in ay la timaado abbaabul dhammeystiran, tabaabusho farsamo, dhaqaale iyo mid khuburo in la isugu geeyo howl–wadeennada dacwadda gacanta ku haya. Intaas dulqaad, sabar iyo dhabar addeeg in lagu daro ayaan soo jeedinayaa.
Dacwada marka la dhageysto, maahan in ay dhamaatay. Wakhti intaan ka badan ayey qaadanaysaa go’aan ka gaaridda dacwadda badda.